सेभेन एलेभेनका टप १० फुड सेलेक्सन | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > सेभेन एलेभेनका टप १० फुड सेलेक्सन
कम्बिनी स्टोर जापानको जता ततै हुन्छ। यसले जापानको जिबन शैली निकै सहज बनाउछ। यहाँ हरेक स्ट्रीटमा दुई वा दुई भन्दा बढी कम्बिनी हुन्छ। यहाँ को कम्बिनी स्टोर अरु देशमा भन्दा निकै फरक हुन्छ। जापानको कम्बिनी निकै राम्रो र थुप्रै भेराईटिका खाना पाउने हुन्छ। यहाँ हजुरले स्टेट्सको जस्तो ग्रीजी हट डग नभएर थुप्रै स्वस्थकर खान रोज्न सक्नु हुनेछ।
यी कम्बिनी स्टोर मध्य पनि एउटा ब्रान्डको चेन स्टोर सबै भन्दा सुपेरिअर छ। मेरो बिचारमा सेभेन एलेभेनको स्टोरहरु जापानको सबैभन्दा राम्रो कम्बिनी हो। यहाँको मिठो बेन्तोको भेराईटि, मन खुस हुने स्न्याक्स, र अन्य समानले यसलाई अरु स्टोर भन्दा अलि माथि राख्दछ , यो भनेर मैले अरु स्टोरलाई नराम्रो भन्न खोजेको हैन। अन्य कम्बिनी जस्तै लसन र फ्यामिली मार्ट पनि निकै पपुलर छन्।
मैले जापान आएको पहिलो दुइ हप्ता सेभेन एलेभेनको बेन्तो मात्र खाएकोथे।अनि अचम्मको कुरा हरेक दिन मैले फरक परिकार रोजेकोथे। यो रेस्टुराण्टको जति महँगो हुदैन अनि त्यो भन्दा माथि, निकै मिठो हुन्छ। हजुरको अफिसको ब्रेकमा यी बेन्तोहरु छिटो र छरितो लन्चको चोइस बन्न सक्छन। मैले आज त्यहि कम्बिनीको टप १० खाना र फुडको लिस्ट बनाएको छु। आशा छ हजुरहरुको लिस्ट संग मेरो लिस्ट मिल्नेछ।
१०. माच्या मार्समेलो चकलेट
यो स्न्याक हजुरले पक्कै पनि अन्य देशमा पाउनु हुन्न। यो गुलियो र कर्न्ची हुन्छ। यसमा ग्रीन टि (माच्या)को फ्लेभर हुन्छ। यसको १५० येन मात्र पर्दछ । म घर फर्किदा मेरो साथिहरु सबैलाई यो लिएर जानेछु।
९. श्रीम्प ग्राटिन पास्ता
यो लन्च र डिनरको लागि ठिक्क हुन्छ। एउटाले म टन्न हुन्छु। यो एउटा सिम्प्ले पास्ता हो। जापानीमा यसलाई एबी गुरातान पनि भनिन्छ। पास्ता माथि चीज र ह्वाईट सस् रखिएको हुन्छ। श्रीम्पले यो खानालाई झन् मिठो बनाउछ।
८. माच्या कुकी
सेभेन एलेभेनमा माच्या फ्लेभार्का थुप्रै कुक्की पाईन्छ। तर मेरो बेस्ट भनेको यो माच्या कुकी हो। तर यो एउटा मात्रको प्याकेटमा आउछ। यसलाई १३० येन जति पर्दछ। ५ डलर भन्दा कममा ३ वटा किन्न मिल्ने हुनाले म सधै तिन वटा किन्ने गर्दछु।
७. साल्मोन एण्ड क्रिम चिज स्याण्डविच
यसमा प्रयोग गरिने साल्मोन निकै फ्रेश हुन्छ। मलाई थाह छैन यो जापानले कसरि बनाउछ तर मलाई केहि क्रिमि र चिजी खानु पर्यो भने यो मेरो बेस्ट फुड हो। यसमा अलिकति पनि प्रोसेस्ड फुडको जस्तो स्वाद हुन्न। साचिकै फ्रेश स्वाद हुन्छ त्यसैले स्वस्थकर पनि। यसको मूल्य ३५४ येन पर्दछ।
६. प्यान केक
कम्बिनी स्टोरमा प्यान केक पनि पाईन्छ भन्दा हजुरलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर सेभेन एलेभेनमा थुप्रै फ्लेभरको प्यान केक पाइन्छ। माथिको चित्रमा रहेको र मलाई मन पर्ने चाही मेपल सिरप र मागारिन फिलिंग भएको प्यानकेक हो। यसको मूल्य १०८ येन पर्दछ। यदो हजुरले भन्नु भयो भने स्टाफले त्यो प्यान केक तताईदिनेछन।
म बयस्क बहेकोले आफुलाई मनपर्ने समयमा मनपरेको डेजर्ट खान सक्छु। अनि मजाको कुरा मेरो लागि सबै टाईम र सबै मुडमा डेजर्ट मन पर्छ। मलाई मेरो जबमा डेजर्ट खान मनलाग्यो भने तिरामिसु खान्छु। यसको ३०० येन जति पर्दछ।
यो जापानको क्लासिक ब्रेकफास्ट र स्न्याक्स हो। यो राईसको डल्लो हो। यसमा अनेकौ स्वाद मिलाइएको हुन्छ। त्यसैगरी माछा, चिकेन र प्लमहरु पनि राखिएको हुन्छ। मलाई केहि स्टेपल खानु पर्यो भने मा ओनिगिरि खान्छु। धेरै जसो म बिहान काम जानु अघि एउटा ओनिगिरि खाने गर्दछु।
३. ब्लुबेरी एण्ड क्रिम चिज स्याण्ड्विच
यो मेरो अल्टिमेट गो टू ब्रेकफास्ट हो। यसमा दुई वटा स्यान्विच हुन्छ। बिहानको खान्किलाई यो पर्याप्त हुन्छ। मलाई ब्रेकफास्टमा कहिले कही स्विट र फलफुल भएको कुरा खान मन लाग्ने हुनाले यो स्याण्ड्विच मेरो फेवरेट हो।
मलाई घरको याद दिलाउने खाना खानु पर्यो भने म यो स्पाग्गेती खाने गर्दछु। यो मेरो घरमा ममीले बनाउने जति मिठो नभएपनि मेरो लागी कम्फ़र्ट फिल गराउने खाना हो। यो म लन्च वा डिनरको लागि खाने गर्दछु।
१. वाफल आईस क्रिम स्याण्ड्विच
मेरो लागि यो सेभेन एलेभेनमा पाउने सबै भन्दा ट्रिट हो। मैले सुरुमा यो सेभेन एलेभेनमा मात्र पाउछ भन्ने सोचेको थिए। तर यो सेभेन एलेभेनको प्रोडक्ट नभएर जापानी मिल्क एंड डेरी कम्पनि मोरिनागाको रहेछ। यो आइसक्रिम हजुरले अन्य कम्बिनी वा स्टोरमा पनि पाउनु हुनेछ। मलाई यो यति मन पर्छ कि मा यो हरेक दिन खाने गर्दछु। मा स्टेट्स फर्के पछि के गर्छु होला ? यो त लिएर जान पनि मिल्दैन।